Kali Linux 2020.4 inosvika ine akawanda akakosha shanduko, ziva navo | Linux Vakapindwa muropa
Shanduro itsva ye Kali Linux 2020.4 yakatoburitswa kare uye mune iyi vhezheni nyowani yekufambiswa kwepentest kugoverwa tinogona kuwana shanduko dzakakosha, sekushandura ZSH seyakagadzika ganda, AWS yekugadzirisa mufananidzo, zvimwe zvishandiso nezvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive neKali Linux, vanofanira kuziva izvozvo Iyi sisitimu yakagadzirirwa kuyedza masisitimu ekushomeka, odhita, kusara kwe data kuongororwa uye kuona mhedzisiro yekurwiswa kwakaipa.
1 Kali Linux 2020.4 Main Zvitsva Zvimiro
1.1 Dhawunirodha uye tora Kali Linux 2020.4
Kali Linux 2020.4 Main Zvitsva Zvimiro
Iyi itsva edition ye Kali Linux 2020.4 inosanganisira akati wandei shanduko huru uye izvo izvo, ivo vanogadzira Ivo vanojekesa mukuzivisa kuti ivo vapedza switch kubva kuBash kuenda kuZSH.
Shanduko iyi Parizvino yakaitwa mukati memifananidzo yedesktop (i386 na amd64), nepo shanduro dzinoenderera neBash dziri idzo dzeARM, midziyo, NetHunter neWSL, kunyangwe gare gare zvakaitirwa kuti vese vashande neZSH munguva pfupi iri kutevera.
Mukuburitswa kwedu kwemakota matatu, 2020.3, takaraira kuti tichave tichichinja kubva kuBash kuenda kuZSH seyedu default shell mune ramangwana (pazvinogoneka). Isu tinofara kuzivisa kuti mushure mekuyedzwa uye mushandisi mhinduro, shanduko yaitika.
Imwe yeshanduko inomira pachena iri mu Shell mufananidzo wekusimudzira, Sezvo chiziviso chinotiratidza shanduko dzakaitwa mariri kubva kuRedTrack:
Ukuwo, Zvinotaurwa kuti vagadziri veKali Linux vagadzira kusangana neCrackMapExec (Kali akabatana zviri pamutemo nemunyori wayo byt3bl33d3r)
Izvi zvinoreva kuti vese vashandisi veKali Linux vanozowana shanduko dzichangoburwa mu CME isati yaenda kuruzhinji kune wese munhu weses (mazuva makumi matatu zvisati zvaitika), sezvo CME's Kali package ichadhonza zvigadziriso zvakananga kubva kune yayo yakavanzika codebase.
Uyewo, Kali Linux 2020.4 inosanganisira iyo yekuvandudza kwemazhinji emapakeji izvo zvinoumba iyo sisitimu, pamwe nematurusi matsva.
Pane chikamu chekuvandudzwa, kwepakeji akakosha isu tinogona kuwana iyo nyowani vhezheni yeiyo Linux kernel 5.9, GNOME desktop vhezheni 3.38 uye KDE vhezheni 5.19.
Kana ari zvishandiso zvitsva zvakawedzerwa, tinogona kuwana zvinotevera:
Metasploit Sisitimu v6
Kali NetHunter (iyo mobile pentesting chikuva chekuparadzira), ine menyu yekumisikidza mitsva kufambisa negadziriro yeparutivi uye kudzoreredza ekumisikidza mafaera, pamwe ne module inovimbisa kutsungirira kweiyo Android Magisk rooting system.
Win-KeX 2.5 (iyo inopa Kali desktop ruzivo rweWindows subsystem yeLinux) inosanganisira iyo nyowani yakavandudzwa sosi modhi yezvigadzirwa zveARM uye mamwe marongero.
Uye kwaariIyo AWS Cloud chifananidzo chakaunzwa uye chakasanganisira mutsva metapaqukukushevedza kali-linux-isina musoro, iyo inounza yese yakasarudzika seti yekuraira maturu maturu
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve ichi chitsva kuburitswa kwekugovera, unogona kutarisa kubhuku Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha uye tora Kali Linux 2020.4
Kune avo vanofarira kugona kuyedza kana kuisa zvakananga vhezheni itsva ye distro pamakomputa avo, ivo vanofanirwa kuziva kuti ivo vanogona kurodha pasi izere ISO mufananidzo (4.1 GB ver. X64) kana mufananidzo wakadzikiswa (3.3 GB ver. X64) iyo yatove zvinowanikwa kurodha pasi pane webhusaiti yepamutemo wekugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kali Linux 2020.4 inosvika ine akawanda akakosha shanduko, tanga wavaziva